Kwenzekani ngamabhayisikili eBarclays? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > IBarclays bike london - izimpendulo ezilula zemibuzo
IBarclays bike london - izimpendulo ezilula zemibuzo
Kwenzekani ngamabhayisikili eBarclays?
Okwe-amabhayisikilieyaqala ukukhishwa eminyakeni eyi-10 eyedlule, ama-3,993 asesemgwaqeni namuhla, yize izingxenye zawo zizoshintshwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi ziphephile futhi zisebenza kahle. Isamba esingu-6,654imijikelezoziyekisiwe ukusebenza selokhu kwaqala uhlelo ngenxa yezizathu ezifana nokuthi zilahlekile, zebiwe noma zalimala ngendlela engalungiseki.30. 2020.
Mina? Ukuhamba ngebhayisikili eLondon? Cha! Ngiyafa. Kufanele uhlanye ukugibela ibhayisikili eLondon. Ngangigibela ibhayisikili, kodwa kunemigwaqo eminingi kakhulu.
ukuhamba ngebhayisikili ngemuva kokuhlinzwa kwe-acl
Ngizamile ukuhamba ngebhayisikili kanye, kepha bekukhona ibhasi ngaphesheya komgwaqo. Aghgh! Yini engalungile ngalaba bantu? Ukuhamba ngebhayisikili ukuzivocavoca okuhle, kumahhala, kumnandi, ungashintsha umzila wakho ngendlela othanda ngayo, ungapaka noma kuphi, kuvame ukushesha kunebhasi, kwesinye isikhathi kusheshe kunethubhu, kepha nokho kunabagibeli bamabhayisikili eLondon nganoma yisiphi isizathu namanje kuyaqabukela futhi kungajwayelekile Manje kungani ukuhamba ngebhayisikili kungejwayelekile eLondon? Ngabe ihlobene nendlela okwakhiwe ngayo imigwaqo? Noma ingabe kukhona okunamathiselwe esikweni lethu? Noma ukuxubana okuyinkimbinkimbi nokungafani kokubili, kuhlanganiswe nezinye izinto ezithokozisayo ngokumangazayo ezithatha cishe imizuzu eyishumi ukuxoxa ngazo? Ingqalasizinda yokuhamba ngebhayisikili eLondon ibiside isikhathi eside kunalokho ocabanga. Ngawo-1930, lapho kwakungashayeli muntu, abahleli bedolobha abahlakaniphile banquma ukuthi izimoto namabhayisikili akufanele kuhlangane.
Amadlelo amasha eMorden, ePerivale, naseRomford anikezwe imizila yamabhayisikili ecwebezelayo, ebanzi, nehlukene. Eyokuqala yalolu hlobo yavulwa ngo-1934 nguNgqongqoshe Wezokuthutha uLeslie Hore-Belisha. Kepha azange zisetshenziswe kangako.
Ngaleso sikhathi, amaqembu amabhayisikili ayeyizonda le ndlela ebizwa ngokuthi yimijikelezo. Bebesaba ukuthi bazophoqeleka ukuthi bazisebenzise bese bevinjelwa emigwaqweni ejwayelekile. Yilokho kanye uLeslie Hore-Belisha ayekufuna, ethi abagibeli bamabhayisikili 'bangabantu abayingozi kakhulu emgwaqweni namuhla'.
Ngakho-ke ukuguqulwa kwamabhayisikili akuzange kufike. Kepha uguquko olusha lwalusondele. Ukwethulwa kwemoto entsha.
Ucabanga ukuthi awukwazi ukukhokhela imoto? Ngenxa yobuchwepheshe, imoto entsha ishibhile kunanini ngaphambili. Ungakwazi ukukhokhela imoto entsha. Imoto entsha ikuvumela ukuthi ushayele imoto yakho entsha - Uyayithanda imoto yakho entsha? - Ngiyayithanda imoto yami entsha. (ukuhleka) (kugcina ukuhleka) Njengoba izimoto sezithengeka kakhulu, imigwaqo yaba matasa.
Ngakho-ke abahleli bama-1960s, ngokuhlakanipha kwabo okuphelele, bashintsha imigwaqo ekhona yaseLondon ukuze benze isikhala esengeziwe sezimoto. Futhi abagibeli bamabhayisikili babekhohliwe ngokuphelele. Umlando weHyde Park Corner usuphendulwe waba umjikelezo omkhulu we-spooky lapho yonke imizila kungumugqa ongafanele, i-Elephant neCastle, iWaterloo neHammersmith. (Izimpondo zezimoto) IWestway yakhiwa.
I-Blurgh! Futhi cishe yonke imizila yamabhayisikili emadolobheni yanyamalala ngawo-1930. Eminye yaba yimizila yezimoto kanti eminye yaba yizindawo zokupaka. Ngokumangazayo, inani labahamba ngebhayisikili eLondon lehla kakhulu emashumini ambalwa eminyaka alandelayo. * Ukuphahlazeka - Oww !! Le ndatshana esabisayo evela cishe ngonyaka we-1984½ uzama ukukhuthaza ukuhamba ngebhayisikili eLondon, ukholwe noma ungakukholwa, ikhombisa ukuthi impilo yokukhohlisa neyesabekayo emasondweni amabili isiphenduke kanjani.
Kwakunezimoto 1, abashayeli bamabhayisikili befile. Khonamanjalo eYurophu amadolobha afana ne-Amsterdam, nawo ayebulala ngokufanayo emigwaqeni yama-1970 eya eLondon, ingasaphathwa eyabantwana abambalwa abashonile, anquma ukwenza okuthile ngesibindi.
Eminyakeni engamashumi amathathu eyalandela, imigwaqo eyingqophamlando yaklanywa kabusha ngokuphelele ukuze kubekwe phambili abahamba ngezinyawo nabahamba ngezinyawo. Izimoto zivinjelwe kweminye imigwaqo futhi ezintsha zihlukaniswe, kubanzi, akuphazamiseki, imizila yamabhayisikili ebushelelezi yakhiwe emizileni abantu ababevame ukuhamba ngayo. Ukuguqula i-Amsterdam ngaphandle kwakungelula futhi akwenzekanga ngobusuku obubodwa, kepha ekugcineni ukuhamba ngebhayisikili kwaba yindlela ejwayelekile yokuhamba.
Futhi bekuyizimoto obekufanele zifunde ukulinda ithuba lazo, zisuke endleleni, futhi zithathe umgwaqo omude. Lokho akusho ukuthi amaDashi angabathandi bamabhayisikili. Kufana nokusho ukuthi wonke umuntu wase-UK ukhathazeke ngokuhlanza umshini ngoba wonke umuntu unaye - EHolland - eNetherlands! abekho abagibeli bamabhayisikili eNetherlands.
Laba bantu ngothisha, odokotela, abameli, abafundi, abahlaziyi bezinhlelo, abahloli bamanani aqashiwe, nezinkanyezi ezingcolile. Kungani lokho kungenzekanga eLondon? Kunzima ukusho. Mhlawumbe kungenxa yokuthi thina maBrits besilokhu sinamathele kakhulu ezimotweni zethu.
Ngawo-1980, izimoto zaziwuphawu lwesimo. UMargaret Thatcher, njengoba uyazi, uthe 'Indoda engaphezu kweminyaka engama-30 esemabhasini ingazibiza ngesehluleki.' Lokhu bekusho ukuthi osopolitiki nabahleli abafuna ukwenza ngcono ukuhamba ngamabhayisikili bahlala bekwenza lokho beboshwe izandla ngemuva.
Abakwazanga ukungena endleleni yezimoto zethu ezinhle. Esinye isizathu esingaba khona yindlela iLondon ebisetshenziswa ngayo iminyaka eminingi kangaka. Ngemuva kokuthi uThatcher eyichithile i-GLC ngo-1986, ingqalasizinda yamabhayisikili nokunye okunjalo kwanikezwa amadolobha angama-32 axabana eLondon, ngakho-ke kwakungekho noyedwa owayengenza ushintsho lwamasiko lonke.
Kodwa lokho kufanele kuguquke ngonyaka ka-2000. Ngokokuqala ngqa, iLondon yaba nomhlangano kanye nemeya ekhethwe ngqo enamandla nesabelomali sokucabanga okukhulu. UKen Livingstone * umbhede kanye nezokuThutha ezisanda kumiswa zeLondon, noma i-TfL ukubhekana nokucinana okungapheli nokungcola kobuhlanga, futhi babona ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kungadlala indima ebalulekile.
Yize kwakushiywe yisikhathi, ngotshalomali olufanele, iLondon yayinamandla okuba yi-mecca yokuhamba ngebhayisikili njenge-Amsterdam. Noma kunjalo inesimo sezulu esifanayo, iyisicaba (ikakhulukazi), imigwaqo ibanzi ngokwanele futhi uhambo oluningi eLondon luhamba kahle ngaphansi kwamamayela amabili.
Kwakungenzeka ngokuphelele. Kwakufanele bakwenze ngokushesha, futhi kwakumele bakwenze manje. Cishe eminyakeni engaphezu kwengu-7 kamuva, uKen Livingstone weba umbono ovela eParis: Isikimu Sokuqasha Umjikelezo.
Yonke indawo enkabeni yeLondon, kufanele kwenziwe iziteshi zokumisa izikebhe ezinamabhayisikili anesisindo esikhulu futhi zigqame ukuze kuzanywe ukweba. Futhi noma ngubani onekhadi lasebhange nemilenze emibili angaziqasha ngemali encane. Kuze kwaba ngo-2010 ngohlelo lokuthi luqhubeke lapho iLondon yayinomeya omusha okwakungumqondo wayo.
Banikeze uhlelo isidlaliso esidukisayo kodwa esingalibaleki futhi esihlala isikhathi eside esithi 'Boris Bikes'. Babeyi-hit esheshayo, ithandwa ngabantu bendawo nabavakashi abaxegayo. Basizile ukuthuthukisa umbono wokuthi ukuhamba ngebhayisikili emadolobheni akuyona nje eyabantu abathanda iLycyra-clad, kepha wonke umuntu.
Njengoba kunamajikijolo amaningi amasha anyakazayo emgwaqeni, bekubaluleke kakhulu kunakuqala ukuthi iLondon ibe nemigwaqo ephephile yokugibela ibhayisekili. Ngakho-ke ngawo lowo nyaka kwafika uhlelo lwesibindi semeya kuze kube manje: umjikelezo omkhulu. Lokhu bekuwuhlobo olusha olukhethekile lomgwaqo omkhulu womjikelezo wabagibeli obebhalwe ngokusobala amabanga amade futhi upendwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka okugqamile ukufaniswa neBarclays, exhase yonke le nto. Kwahlelwa imigwaqo emikhulu engu-12, eyayibalwa njengamahora ewashi aqhamuka enkabeni yeLondon.
Owokuqala, owavulwa ngo-2010, kwakungu-CS7, owadlula eSouthwark Bridge ongasetshenziswanga kahle, wanyonyobela i-Elephant neCastle, walandela umugqa osenyakatho wehla waze wayofika eColliers Wood. Ngokulandelayo kwafika i-CS2, eyayiqonde empumalanga isuka e-Aldgate idlule eWhitechapel iye e-Olympic Park eStratford. Kodwa ingabe le migwaqo emikhulu yayihle? Uh cha - yize kakhulu - AAAARGH !! AAARGH !! yize ibhalwe uphawu oluhle kakhulu futhi inomthunzi omuhle oluhlaza okwesibhakabhaka, bekungekho lutho oluhlukanisa ngokomzimba abagibeli bamabhayisikili ezimotweni ezidlulayo, amabhasi namaloli.
Kwesinye isikhathi umbala oluhlaza okwesibhakabhaka wayeka kungazelelwe, uphenduke umzila webhasi, noma ugcwale izimoto ezimile. Abagibeli bamabhayisikili abasha abanamahloni, bona kanye abantu abathuthukiswa ukuthi bazizwe bephephile ngalolu hlelo, abazizwa bephephile nakancane. Okukhathaza kakhulu ukuthi abagibeli bamabhayisikili abasha nabazethembayo babekwa emqondweni ongamanga wokuphepha ngaleso sikhathi, lapho upende oluhlaza okwesibhakabhaka uphuma, uqhuma.
UVenera Minachmetova, ongusomabhizinisi waseRussia oneminyaka engama-24 ubudala, ubulawe yiloli eBey Interchange, ongomunye wabashayeli bamabhayisikili abahlanu abashonele emigwaqweni yenhlokodolobha emasontweni amabili nje vo ukuthi imeya neTfL bayeke ukubulala abagibeli bamabhayisikili. Uma ubhekisisa imidwebo yemigwaqo emikhulu yasekuqaleni uthola ukuthi zazingacatshangwa ngendlela eyingozi. Ngokwale mephu, i-CS11 bekufanele ishayele i-Kilburn High Road encane kakhulu.
Futhi kwakukuphi ngempela? Ngabe bafuna ukuhamba? Ngakho-ke i-TfL ibuyele ebhodini lokudweba futhi kulokhu yathatha ngokungathi sína kakhulu. Isizukulwane esilandelayo semigwaqo emikhulu evela ku-2013 kwaba ngcono okukhulu. Ukwehlukaniswa ngokomzimba nethrafikhi enemisebenzi efana namarobhothi azinikele nezitobhi zamabhasi ezintantayo, lezi bekuyizindlela zomjikelezo zangempela amaDashi ebekufanele.
Ngabe le migwaqo emisha yaba impumelelo? Yebo, ukuhamba ngebhayisikili kule mizila kukhuphuke ngama-60%. Ngesikhathi sokujaha, ama-60% alo lonke uhambo ahamba ngebhayisikili. Kukhona ngisho nesiminyaminya sebhayisikili.
Kukhombisa ngokusobala ukuthi uma uyakha, bazofika. Kukhuthazwe impumelelo yemigwaqo emikhulu yomjikelezo, idolobha laqala ukuzenza isilima ngokuhamba ngebhayisikili. Bheka! ITorrington Place ivaliwe ezimotweni eziya entshonalanga.
Bheka! I-junction yasebhange amabhasi namabhayisikili kuphela phakathi nezinsuku. Bheka! ICamden igcwalisa imigwaqo yayo ngama-armadillos. Ama-ARMADILLOS! Siqala nokulungisa amaphutha ethu wama-60s ngokuguqula imigwaqo eyindilinga enkulu ibe yimigwaqo ephephe kakhulu, noma ngabe iyadida, ingaphakathi, ingumbuzo omise okombuzo.
I-Archway, iNdlovu neCastle, iWaterloo, kepha hhayi iHammersmith - sekwephuze kakhulu ngeHammersmith. Ngakho-ke wonke umuntu uyajabula noma ingabe? Ukuguqulwa kwamabhayisikili kudonse ukugxekwa kwamanye amaqembu afana ne (Game Show Summer) - Ooh, ibhadi futhi usuphelelwe yisikhathi.
Kodwa wenze kahle kakhulu. Wenze umlando, wenza imigwaqo emikhulu, waze waya e-Amsterdam. Kepha kunokunye okuningi ongakusho.
Ngabe ubuya ngengxenye 2? - Uh, yebo, ngizo. - Kuhle kakhulu! Silangazelele lokho, akunjalo? Sizokubona ngemuva kwekhefu! phuka ♫ ♫
Ngingalithenga kuphi ibhayisikili leBoris?
Mane nje ulande uhlelo lwethu lokusebenza lwe-Santander Cycles noma uye kunoma yisiphi isiteshi sesiteshi sokumisa idokodo ngekhadi lakho lasebhange bese uthinta isikrini ukuze uqalise. Akunasidingo sokubhuka - qasha iSantanderUmjikelezo, uyigibele, bese uyibuyisela kunoma yisiphi isiteshi semikhumbi.
Abizwa kanjani amabhayisikili eBoris manje?
3. Re: London nguAmabhayisikili eBoris-sekhona namanjekubizwelokho?Borisakaseyona iMeya yaseLondon, ngakho-ke akusekhoAmabhayisikili eBoris. IMeya entsha nguSadiq Khan, ngakho-ke kunjalomanjeImijikelezo yeSadiq.
-Boris Johnson akahambisani. Ungumgibeli wamabhayisikili okhuthele, futhi ngenkathi eyiMeya yaseLondon wayaziwa ngokuhamba ngebhayisikili ukusebenza. -Boris - Boris Johnson, yebo.
Uhlobo lwebhayisikili. -Ubuye wathatha isithombe sakhe esingejwayelekile ngesikhathi esebenza njengongqongqoshe wezangaphandle -Kuyoba yimpumelelo enkulu. Impumelelo enkulu-Kunabantu abaningi okungenzeka ukuthi bangabi abalandeli abakhulu bakaBoris abangasebenzisa igama elithi 'Buffoon', ukumchaza.
Futhi ngicabanga ukuthi ngendlela exakile angakuvuma lokho. Kubonakala sengathi usebenzisa lolu hlobo lwe-buffoon ukuphika iqiniso lokuthi empeleni ungumuntu onomdlandla kakhulu futhi okhuthazayo. UJohnson unendaba yezinkulumo eziphikisanayo futhi kwesinye isikhathi ezihlambalazayo. -Akulona ilungu lobandlululo lelo kuphela, futhi ubhebhezela noqhekeko -Ngaphambi kokuba angene esikhundleni, uJohnson wayeyintatheli eyaziwa ngokuqhosha nangokukhululeka ngeqiniso. Umsebenzi wakhe wokuqala wawuse ILondon Times, kodwa waxoshwa.
Wenza isicaphuno empeleni esivela kunkulunkulukazi wakhe, okwakungajwayelekile ukuxoshwa. Wabe eseba ngumbhali wezindaba waseBrussels weThe Daily Telegraph, elinye lamaphephandaba amakhulu aphiko lokudla eGreat Britain. Futhi ngenkathi elapho, wayekubona, niyazi, uhlobo oluthile lokungakhathali, uhlobo lwempilo ye-EU yobushiqela.
Futhi wakwazi ukukwenza kuthakazelise. Okumenze waba ngumuntu ovelele kwezepolitiki ukuthi
IMeya yaseLondon.-Ngemuva kwamahlandla amabili njengeMeya yaseLondon, uJohnson ubuyele ePhalamende ngo-2015 futhi wathola isihlalo njengelungu lePhalamende ngesikhathi umkhankaso weBrexit uthola indawo. Angicabangi ukuthi kukhona ongasho ngokusobala ukuthi lokhu kunguquko eyisisekelo ebudlelwaneni be-EU noma baseBrithani ne-EU.
Futhi ngicabanga ukuthi ngemuva kweminyaka engama-30 yokubhala ngakho, sinethuba lokwenza okuthile empeleni - nginethuba lokwenza okuthile empeleni. Ngingathanda ukubona ubuhlobo obusha. Abagxeki bakaJohnson banokuqhathanisa okungafani phakathi kwakhe noMongameli Trump, kodwa unokwesekwa okuqinile esikhungweni se-UK Conservative. - Kukhona iTrump Denmentation Syndrome, yikuphi okusha akushilo, Iyini i-tweet yakamuva ayishicilelayo? mayelana nokuthi akahambisani yini nalokho akusho namuhla nalokho akusho izolo.
Okubathandayo ukuthi uyabanikela yini noma cha, noma ngabe uyabalwela futhi abakhulule ngenxa yabo. Futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuzoba yisifundo ekubhekaneni noBoris Johnson ngoba ngeke kuswele ukushayisana, kepha uzobahleka. Umbuzo uthi ngabe lizosiza izwe noma lilimaze izwe. - Yize uJohnson engumuntu oyingqayizivele kwezepolitiki zaseBrithani, imvelaphi yakhe ingena ngendlela yesiko likaNdunankulu waseBrithani ngezindlela eziningi.
Ngakho-ke akayena obizwa nge-Little Englander, kepha ungumuntu womhlaba jikelele. Ngasikhathi sinye, uyingxenye enkulu yezikhulu zaseBrithani. H Waya e-Eton College waphinde waya e-Oxford, lapho ababephila ngesikhathi sakhe kwakunguDavid Cameron, uNdunankulu waseBrithani ahlukana naye ukuxhasa 'uBrexit', uMichael Gove onguzakwabo waseBrexit kodwa ngoba uGove wayengamsekeli umncintiswano wokuqala wobuholi be-post-Brexit, ayengaboni ngaso linye kulo, noJeremy Hunt manje oyimbangi yakhe yokuba ngumholi weConservative Party. - Ukuba undunankulu kuwumsebenzi onzima njengamanje.
Sekuphele iminyaka emibili uTheresa May ezama ukuthola indlela yokuthi iBrithani ishiye i-EU. Kungenzeka singashiyi i-EU izinyanga eziningi. Singahamba ngaphandle kokuvikelwa okunikezwa yisivumelwano.
Kungenzeka singaze siyeke nhlobo.-Kunokungabaza okuningi ngokunakwa azokukhokhela umsebenzi wakhe. Ngasikhathi sinye, uhlakaniphe ngendlela eyisimanga, ukhuthazeka ngendlela eyisimanga.
Ushiye ngaphandle kokungabaza ukuthi ufuna ukubukwa njengekhulu lama-21 uWinston Churchill, uma ecabanga ukuthi le yimpi yakhe yokunqoba uzozama ukuyinqoba.
Isiphi isivinini sebhayisikili esisheshayo?
NgeSonto ngo-Septhemba 16, 2018, uDenise Mueller-Korenek unqamule i-ibhayisikiliumhlabaisivininiirekhodi lika-167mph, ishaya ngo-183.932mphe-Utah's Bonneville Salt Flats.
Selokhu iningi lethu laqala ukuhamba ngebhayisikili, kube nokulangazelela okuvamile: Singashesha kangakanani ukulinganisela uhambo lwethu lwamabhayisikili? - Futhi lokhu kuyimpawu enhle yemvelo futhi ozoyibona inqubekela phambili ezinyangeni naseminyakeni yebhayisikili lakho. Kodwa kanjani? singawakhama amandla e-extracomes? - Ooh, nginemibono embalwa ngalokhu. - Ake sithole. - Mhlawumbe ungagibela umzila ofanayo.
Uma ungaboni nqubekela phambili ngesivinini sakho esimaphakathi mhlawumbe uyabaphambanisa Ukushayela kwakho akwanele ukukhuphula izinga lakho lokuqina ngendlela ongathanda ngayo. Ngamanye amagama, ungahle ube stale. Ngakho-ke zama imizila ehlukene ngokuhlukahluka okuningi.
Futhi indawo enhle yokuqala ukwenza ukugibela kwakho okuthandayo ubuyele emuva - Isizathu esivamile esenza abantu babone ithafa ekuqhubekeni kwabo kungenxa yokuthi bamane benza iseshini efanayo kukho konke ukugibela. Lokhu ngeke kusebenze - Kulungile lokhu kuvame kakhulu kubagibeli bamabhayisikili futhi bathambekele ekuhlaleni ngejubane nomzila ofanayo, kepha lokhu ngeke kuphoqe ukulungiswa okuhle kokuzivocavoca ngakho zama ukukuxuba futhi ubeke izikhawu.
Ngalokho sisho ukuthi ngeke ubone ukuhlukahluka komzamo owenziwe ekuzivocavoca kwakho. Futhi uzosebenza kulowo mdlali wasesiswini osabekayo. Futhi ukuqina kwakho? izoba nomphumela ofanayo.
Ngeke ukwazi ukushukumisa umzimba wakho ngokwanele ukuze ulingane. Uzoyigcina nje. Futhi akekho oyidingayo.
Qala ukuphambukisa kwakho ngokuqabuleka. Uma ufuna isivinini esithe xaxa mahhala mahhala, thatha usuku ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokusebenza kwakho kanzima ukusetha ijubane lakho elisha elijwayelekile. Yenza inani elifushane ngosuku lwangaphambilini ukuze imilenze yakho imanzi futhi uzizwe uvuseleleka futhi uqine kunanini ngaphambili ekuhambeni kwakho.
Ukuhamba ngebhayisikili ngumdlalo we-aerobics womoya. Lokhu kusho ukuthi uzozuza kakhulu kulo mzamo cishe imizuzu engamashumi amabili kuya kwamashumi ayisithupha. Ukusebenza ngokuzivocavoca ngamandla okukhulu ngalesi sikhathi kukhulisa ukuqina komzimba wethu.
Lokhu kusenza sikwazi ukushayela ngejubane eliphakeme kakhulu. - Lokhu kuzosiza ukudweba isithombe somzamo ozothatha ukukhuphula ijubane lakho elijwayelekile. Kuzokusiza ukuthi uqonde ukuthi wehlise ijubane kancane futhi udinga ukubona isikhathi esincane noma ijubane, kepha nokuthi uzokwazi nini ukuqhubeka nokukhulisa isilinganiso - ngakho-ke gxila kuzo zonke izici zokuhamba kwakho nokuthi lokho kugibela kumayelana nani. - Ukugibela kwakho kukude kangakanani? Futhi ngabe lokhu kuyalishintsha ijubane ongaligcina isikhathi sonke? Uma uqala ngokushesha okukhulu, uzokwehlisa ijubane, akunjalo? - Ungayifaka kanjani uphethiloli ohambweni lwakho futhi uqiniseke ukuthi ufakwe uphethiloli ngokuphelele kulo lonke uhambo.
Futhi uma udinga ukufaka uphethiloli endleleni. - Kuthiwani ngezwe? Uma kunamagquma kufanele uhambe kancane - Futhi uma umisa noma unciphisa okuthile emzileni ngoba kuthinta isivinini sakho esimaphakathi esiyigugu - Futhi ekugcineni, ukukhetha kwemishini nemishini. Ukuba nemishini efanele kanye nemishini nezingubo, kuzokusiza ekuphishekeleni isivinini esiphakathi nendawo - uma ungenayo isilinganiso esifanele segiya lendawo ohlala kuyo noma indawo yokushayela, izinto zingaguqulwa ngokushesha futhi kalula.
Ngakwesokudla? - Ukuze uthuthukise isivinini sakho esimaphakathi, udinga ukucabanga ngejubane lakho ngokwakhiwa. Kukhona-ke esikubona kaningi kakhulu futhi esikwenzile ngokwethu ukushiya phansi ekukhuphukeni futhi sifinyelele phezulu sikhathele ngokuphelele - umoya-mpilo usiphoqa ukuba sihlehlele emuva bese sihamba kancane ukubamba umoya wethu.
Kwenzekani-ke? Ukukhefuzela futhi wehlise ngaphezu kokukhuphuka futhi ulahlekelwe yilesivinini esimaphakathi esiyigugu osisebenzele kanzima. - Esikhundleni salokho, zama ukwakha umfutho lapho uhamba ekugcineni kokwenyuka bese ufuna ukuhlala phakathi nendawo ukuthola umzamo oqhubekayo. Kepha umzamo onzima kakhulu usazofika.
ukuhamba ngamabhayisikili amanoni
Futhi lokhu lapho ufuna ukukuvumela ukuthi kushayeke ngaphezu kwenyuko noma ekwehleni okulandelayo. Le yindlela ephumelela kunazo zonke yokwakha isivinini esihle nokugcina lelo jubane eliyigugu eliyigugu - Uma uhlala endaweni ethambile, cabanga ukuthi ungakusheshisa kanjani ukugibela kwakho. Sincoma ukuthi uqale ngokuzikhandla owaziyo ukuthi ungakuthatha isikhathi esigcwele, kepha ngegumbi elithe xaxa ukusheshisa impela kuze kube sekugcineni futhi uma kuwusuku ogibela kahle ngalo, kunomoya, nakanjani udinga ukucabanga ngokuthi ukunciphisa inani lomzamo owenzayo ohambweni.
Yize kukuthokozela ukugibela ungenawo umsila womsila ngoba uyashesha ngempela, akuyona indlela engcono kakhulu yokusebenzisa amandla. Ingabe kunjalo? Ngoba uma ujika ushaya isiphepho, awunalutho olusele emilenzeni yakho - manje angisho ukuthi ngibuyele ngokuphelele.
Kepha uma uzama kanzima futhi uzithwala ngejubane lomoya osusa umsila, uma kukhulunywa ngumoya oyinhloko, uzoba namandla amancane okulwa. Futhi manje njengoba sikhuluma ngumoya nomoya ovunguzayo, sekuyisikhathi sokushintsha isikhundla sakho kubhayisikili. Ukuze uzenzele i-aerodynamic ngaphezulu ukuze ukwazi, sika imbobo encane emoyeni.
Izinguquko ezincane zenza umehluko omkhulu ekongeni ugesi nokonga amandla kulingana isivinini. Ekugcineni phendula lo mbuzo ngobuqotho: Ngabe uzama ngempela kanzima njengoba ucabanga? Setha isivinini esisheshayo esisheshayo njalo uma ushayela. Njengoba kushiwo ngaphambili, ukuvuselelwa kungaba yinto ekusiza kakhulu uma ufuna ukusetha isivinini esisheshayo esisheshayo kepha ungalindeli ngaphezu kwesisodwa noma kabili ngesonto.
Ingabe ijubane elijwayelekile yinto ongayilungiselela ukugibela kwakho, ake sazi kumazwana angezansi ukuthi uzama kangakanani futhi ulinganise ijubane elingakanani. - Futhi uma uyithandile le ndatshana, yinike isithupha esikhulu.
Kwenzekani uma ulahlekelwa ibhayisikili leBoris?
Uma umjikelezo wakhokuyintoelahlekilenoma untshontshiwe, shayela Isikhungo Sokuxhumana ku-0343 222 6666 *.Thinakuvulwa zonke izinsuku zonyaka.Wenakufanele ubeke njaloeyakhoukuphepha komuntu kuqala.Umaiumjikelezokuthathwe kuwenangamandla, biza amaphoyisa.
Ngingalithola kanjani ibhayisikili lamahhala leSantander?
Ukuhamba ngebhayisikilingizomahhalaohambweni lwemizuzu engama-30 usuku lonke. Ukuphela kokufanele ukwenze ukusebenzisa ikhodi CFD2020 kufayela le-I-SantanderUhlelo lokusebenza lwemijikelezo noma ngqo esiteshini semikhumbi se-mahhalagibela vele uqiniseke ukuthi uza nekhadi lasebhange ukuze utholeibhayisikiliphuma.
Ingabe uBoris uyiTory?
U-Alexander Boris de Pfeffel Johnson (/? F? L /; uzalwe ngomhlaka-19 Juni 1964) ungusopolitiki nombhali waseBrithani osebenza njengoNdunankulu wase-United Kingdom noMholi weQembu Elilondolozayo kusukela ngoJulayi 2019.
Ngabe i-20 mph ngebhayisikili iyashesha?
Ijubane elimaphakathi - izinkomba
Abagibeli bamabhayisikili abaningi bangafeza u-10-12mphisilinganiso kakhulungokusheshangokuqeqeshwa okulinganiselwe. Okuhlangenwe nakho okunengqondo, okuphakathi (yisho amamayela angama-40): isilinganiso cishe esingu-16-19mph. Umgibeli weqembu onekhono impela, okunye ukuqeqeshwa okujwayelekile, amabanga amade (athi amamayela angama-50-60):amashumi amabili-24mph.
Yiliphi ibhayisikili elinguNo 1 emhlabeni?
I-Kawasaki Ninja H2R (Ijubane Eliphezulu) - 248.5 mph
INinja H2R inamandla angamaphesenti angama-50 impela futhi ifaka isondo eliyisondo elifishane elingu-5mm kune-H2 ejwayelekile yomgwaqo, esemthethweni, ekhiqiza amandla ayi-197BHP. I-ibhayisikili elihle kakhulu emhlabeni. Uma sibheka ukuba semthethweni, iKawasaki Ninja H2 yisithuthuthu esisheshayo somgwaqo nesemthethweni ozoba naso.
Ngabe ungalahlekelwa ibhayisikili lakho okuswelekile?
Ngeshwa,iukulahlekelwaisithuthuthueiekuqaleni kukaiumdlalo awunakuvinjelwa nganoma iyiphi indlela, njengawoukuingxenye ye-iIndaba esemqoka. Ngesikhathiiamahora ambalwa okuqala weiumdlalowenasizobaukuukudabula phakathiiumdlalo emhlabeni ngezinyawo.
Uphi amabhayisikili eBarclays 4 eDalston London?
Amabhayisikili eBarclays 4 aqala impilo kuBradbury Street Dalston, eLondon ngo-1992. Ekuqaleni ngangibiza ngokuthi 'Amabhayisikili Angcono', ngashintsha igama lapho ngithuthela ezakhiweni ezintsha eziku-515 Kingsland Road, eDalston ngo-1994. Ngemuva kweminyaka engama-25 ngiku-515, isitolo sesisusiwe - kepha ngezansi komgwaqo - uye ku-466 Kingsland Road.
Ngabe iBarclays Cycle Hire inganwetshiselwa kuphi?
Kanye nakukho konke ukumaketha nokuxhumana. Ukunwetshwa kwesikhathi esizayo kweBarclays Cycle Hire kanye nama-roadshows Izindaba ezimnandi ezivela kuxhaso ukuthi lolu hlelo kungenzeka lukwazi ukwanda ngokushesha ezindaweni ezinjengeCanary Wharf kanye neLondon engaphandle. Lokhu kushiwo isimemezelo se-LCC.
Aqale nini amabhayisikili eBarclays 4?
Ngenkathi ngithola ibhayisekili kufanele ukuthi ngangiwumfana ojabule kunabo bonke eLiverpool mhlawumbe umhlaba iBarclays 4 Bikes yaqala impilo kuBradbury Street Dalston, eLondon ngo-1992. Ekuqaleni yayibizwa ngokuthi 'Amabhayisikili Angcono', ngashintsha igama lapho sengithuthela kwelisha izakhiwo eziku-515 Kingsland Road, eDalston ngo-1994.